Daawo Sawirro: Magaalo kutaala Soomaaliya oo noqotay halka ay ku yaalaan Guryaha ugu qaalisan dhanka Kirada iyo sababta!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Magaalo kutaala Soomaaliya oo noqotay halka ay ku yaalaan Guryaha ugu qaalisan dhanka Kirada iyo sababta!!
Daawo Sawirro: Magaalo kutaala Soomaaliya oo noqotay halka ay ku yaalaan Guryaha ugu qaalisan dhanka Kirada iyo sababta!!
Nov 08, 2016WARAR
Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug ayaa xiligan waxaa laga dareemayaa mashquul aad u badan , waxaana magaalada soo buux dhaafiyay musharixiin u taagan doorashada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka iyo Ergooyinka wax dooranaya.
Mashquul badan ayaa laga dareemayaa magaalada gaar ahaan goobaha ay bulshada ku kulmaan sida hoteelada, waxaana magaalada laga dareemayaa isbadal aad u weyn oo ka badalan sidii markii hore aheed.
Guryaha kuyaala magaalada Cadaado oo u badan kuwa Filooyinka loo yaqaan ayaa gaaray heerkii ugu qaalisanaa dhinaca kirada, waxaana inta badan guryaha kireestay Musharxiinta u tartameysa Aqalka Hoose.
Halkii Guri ee kuyaala magaalada Cadaado ayaa xilian lagu kireenayaa lacag u dhaxeysa 4-kun ilaa 3-kun oo Dollar bishii halka ay jiraan kuwa intaas kasii qaalisan, waxaana shardi ah qofka guriga kireesanaya in ugu yaraan uu bixiyo labo bil oo hurumaris ah .
Guryaha lacagtan qaaliga ah la kireenayo ayaa halkii filo qolalka ugu badan ee kuyaala ayaa ah 5 qol ilaa 6 qol, waxaana adag in xiligan aad hesho guri banaan oo kiro ah, inta badan guryaha ayaana ah kuwa lawada kireestay.
Dadkii lahaa ama degnaa guryahan ayaa la sheegay in ay ka guureen ayna degeen guryo yar yar oo kuyaala banaanka magaalada, waxaana inta badan guryaha qurxoon ee magaalada degay musharixiinta iyo ergooyinka kale ee la socda.
Qiimeyn iyo baaritaano la sameeyay ayaa ku cadaatay in xiligan hada la joogo guryaha ugu qaalisan Dalka Soomaaliya ay ku yaalaan magaalada Cadaado, waxaana dad badan oo qaarkood ka yimaadeen Muqdisho ayaa aad ula yaaban qiimo badan ee guryaha la kireenayo.
Guryaha ugu qaalisan ee kuyaala Soomaaliya ayaa ku yaala magaalooyinka waa weyn ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaana guriga Fillada ee ugu qaalisan Muqdisho kuna yaala goobaha amaanka lagu kireestaa bishii lacag u dhaxeysa 5 boqol Dollar ilaa 4 boqol Dollar.
Previous PostDaawo Sawirro: Taageerayaasha Hillary Clinton oo la yaaban natiijada cododka iyo guul Daro usoo ifeysa Xisbigeeda!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Kulan oo Looga Hadlay Dagaalka Gobolka Mudug oo ka dhacay Magaalada Muqdisho!!